Edgar Wright dia namorona Playlist hira 60 natao ho an'ny 'Alina alina tany Soho' - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Edgar Wright dia namorona Playlist hira 60 natao ho an'ny 'Last Night in Soho'
Edgar Wright dia namorona Playlist hira 60 natao ho an'ny 'Last Night in Soho'
Fotoana tokony tadidio
by Trey Hilburn III Oktobra 10, 2021 279 hevitra
Edgar Wright farany Omaly hariva tany Soho handeha eo amin'ny lisitra 10 voalohany tsy misy fisalasalana aho. Horonan-tsary mandeha amin'ny herinaratra sy kanto izy io. Izy io dia tontolo mahafinaritra sy mitaingina. Ny iray amin'ireo zavatra manasongadina ny sarimihetsika dia ireo feon-kira mahatalanjona izay natambatr'i Wright ho an'ny feonkira an-tsarimihetsika.
Ho fanampin'ny feon-kira sy ny naotin'ilay horonantsary, Wright dia nametraka lisitry ny playlist 60 tamin'ny vanim-potoana izay tena mitondra ao an-tsaina ny Alina hariva tany Soho. Azonao atao ny mihaino ny lisitry ny playlist amin'ny Spotify na Apple Music ary matoky anay fa mendrika ny fotoanao tanteraka izany. Mihaino azy hatrany izahay.
Ny synopsis ho an'ny Omaly hariva tany Soho mandeha toy izao:
Ao amin'ny mpampientanentana ara-tsaina nataon'i Edgar Wright, Eloise, mpamorona lamaody maniry, dia afaka niditra an-tsokosoko tamin'ny taona 1960 izay nihaonany tamin'ny mpihira wannabe manaitra, Sandie. Saingy tsy ny glamor fotsiny no jerena ary ny nofinofin'ny lasa dia manomboka mamaky sy miparitaka amin'ny zavatra maizina kokoa.
Ny playlist dia mitaingina tsy mampino ary fomba tsara hiomanana amin'ny famoahana ny sarimihetsika. Mba hanomezana lohany mihaino ny playlist ETO.
Faly ve ianao mijery Omaly hariva tany Soho? Ampahafantaro anay amin'ny hevitra Facebook na Twitter anay.